Izindawo Zebhasi ezizokwandiswa eBelkıs - RayHaber
IkhayaTURKEYUmfunda-mpumalanga we-Anatolia RegionI-27 GaziantepIzindawo Zokuhamba Zebhasi ezizokwandiswa eBelkıs
09 / 10 / 2019 Levent Elmastaş I-27 Gaziantep, Umfunda-mpumalanga we-Anatolia Region, JIKELELE, Highway, Izinhlelo zeThire zeTrime, TURKEY 0
mhlawumbe kuzokwandiswa amabhasi amabhasi
IMeya yaseGaziantep Metropolitan uFatma Sahin, Isifunda saseBelkis esifundeni saseSehitkamil sihambele ukuvakasha komakhelwane. ISahin, ukuze kuxazululwe inkinga yokungasebenzi kwebhasi okwanele eqenjini elingumakhelwane, uBelkis ucele ukuthi aqale imizamo yokwandisa isitobha sebhasi endaweni.
Ekhuluma negama lomasipala wezenhlalo, uFatma Şahin uqhubeke nokuhambela le ndawo ukuze azobona izinkinga zisendaweni futhi alalele izakhamizi. Ukuhlola izinkinga kusihlalo we-muhtars ongomakhelwane, indlela exazululekile yokuxazulula izinkinga iphinde yasungula isihlalo sobukhosi ezinhliziyweni zezakhamizi.
I-Mesaisine, i-Şehitkâmil Belkıs Isifunda sesifunda, kusukela eSahin, womabili umsebenzi owenziwe endaweni okuhlolwe kuyo, futhi sakhomba nokusilela komakhelwane, iqembu linikeze imiyalo yokuqeda ukusilela.
Ukubonakaliswa komsebenzi ophothuliwe ngokubonisana nenhloko yomakhelwane u-Enver Özekici'yle Sahin, umphakathi osondelene nokuthuthwa komphakathi futhi ngenxa yemingcele eyandayo yomakhelwane ukungaphenduli kahle kwesifiso sokukhulisa isibalo samabhasi, ucele iqembu ukuthi liqale umsebenzi ukuxazulula inkinga. UMukhtar Özekici'yi ubhekabheka eziteshini eziseduzane nomongameli, imoto inesithakazelo esikhulu kwizakhamizi ezilinde imoto, exoxa ngezinyawo.
Umakhelwane waseBelkis iminyaka eminingi ukuxazulula ukushoda kwamanzi, ubonga uMongameli Fatma Sahin ngemizamo yakhe kubahlali bendawo, omakhelwane asphalt kanye nokuphothulwa komsebenzi kule ndawo wathi kuzosombululeka ukushiyeka.
Ukwandiswa kweTram Kuye eGaziantep Kwandisa Amandla Egibeli 14 / 01 / 2018 Ukwandisa izitebhisi nokwandisa izinqola emigodini eqhutshwa yiGaziulaş, engumsizi kaMasipala waseGaziantep, wandisa umthamo womgibeli. Ukwanda kwenani labagibeli abakhetha i-tram ohlelweni lokuthutha kubangele ukwanda komthamo wezimoto ezisebenza ohlelweni lwesitimela nokwandiswa kwezimoto. Kwachazwa nokuthi ithuba elihamba phambili lokuthutha lwakhiwa ngezifundo. Ngokwesitatimende seziphathimandla zaseGaziulaş; Ngaphambi kokwandiswa kwe-stop, izinqola eziphezulu zaqhutshwa yi-2017 wagon ku-38. Ngalendlela, induduzo yabagibeli ithuthukisiwe. Izikhulu zeGaziulaş, unyaka we-2018, ngisho nenani lezinqola ezisebenza nsuku zonke i-40'ın ehlelwe ukwandisa ...
EJalimane, ukugqugquzela izinkampani zamabhasi kwanda lapho ukukhululwa kwesitimela kuphakanyiswa 24 / 04 / 2014 EJalimane, isikhuthazo sezinkampanini zamabhasi sakhuphuka lapho kukhishwa isitimela sokuhamba komgwaqo: Ukuhamba kwezimoto ezikhulayo kuye kwayanda eJalimane kusukela ngo-2013 kanti izinga lokuhamba ngamabhasi amancane likhula ngemva kokuzimela kwe-Railways yaseJalimane (DB). Ukuhamba ngebhasi, okungenani eshibhile kune-50 ngesitimela, kuvame ukusabalalisa phakathi kwamadolobha amakhulu. I-Baden-Württemberg (BW) ingenye yezindawo ezikhuthaza izinkampani zamabhasi. Kulo nyaka, uMnyango Wezokuthutha Kahulumeni uhlanganisa nenkampani yebhasi ye-73 njengesikhuthazo. Inani lemali elikhuthazayo lizofinyelela ku-5 million Euros kulo nyaka. Izikhuthazo zizohluka phakathi kwe-17 ezinkulungwane ze-500 nama-157.500 ama-Euro kuye ngokuthi isimo sezinkampani. Kungakhathaliseki ukuthi izimoto zinobungane ngenkathi zikhuthaza ...
I-Izmir Winter Bus, Amamodeli kaMetro neBhasi Ukwanda 19 / 09 / 2016 I-Schedule Schedule, Winter and Metro Schedule e Izmir Ukwandiswa: UMasipala waseMzzir wase-ESHOT kanye no-İzmir Metro A.Ş, ngokuvulwa kwezikole 19 September, isikhathi sasebusika siqala ngoMsombuluko. Ukuvama kwamabhasi kanye nomgwaqo ongaphansi komhlaba kuyanda. I-ESHOT Yomqondisi Jikelele kanye ne-İzmir Metro A.Ş ihlele kabusha isimiso sayo ngokucabangela ukukhula okukhulayo namahora okufundisa ezikoleni ngokuvulwa kwezikole ngo-19 September. Ngakho-ke, ibhasi le-1286 lengezwe ebhasi le-186, okwamanje endizazini, futhi inani lamabhasi ohambweni lwandisiwe libe yi-1472. I-ESHOT Iziphathimandla Zomqondisi Zonke Ziningi usuku lwe-15 ibhande elisha elifika emzini wedolobha
Izikhathi zebhasi ku-Konya zishintshile! Isevisi ye-Tram yanda 12 / 06 / 2017 Izikhathi zebhasi ku-Konya zishintshile! Izinkonzo ze-Tram zanda: UMasipala waseKonya, isikhathi sebhasi sokuya ukuhlela ukuhamba ebusuku kusikhamuzi samemezela ukufakwa kwe-tram. isitatimende Konya Metropolitan Municipality kusukela Ezokuthutha wokuHlela Rail Systems uMnyango akushilo: "amahora 12 libekwa ngezikhathi ku yonke imigqa ibhasi ngoMsombuluko, Juni. Amashejuli amasha amenyezelwa kusukela kuma-panels amanani kanye nekheli le-www.konya.bel.tr lewebhu. Nalapha futhi, 12 Juni kusukela ngoMsombuluko Seljuk District of Bosnia and Herzegovina, Kosovo futhi Sandzak endaweni a nezokuthutha ngempumelelo kakhulu futhi kahle ngolayini inhloso 58 Cha izuzwe 'Bosnia and Herzegovina yethilamu Drayivu Line' kusukela Umzila ibhasi ...
Ukwandiswa kweTram Kuye eGaziantep Kwandisa Amandla Egibeli
EJalimane, ukugqugquzela izinkampani zamabhasi kwanda lapho ukukhululwa kwesitimela kuphakanyiswa
I-Izmir Winter Bus, Amamodeli kaMetro neBhasi Ukwanda
Izikhathi zebhasi ku-Konya zishintshile! Isevisi ye-Tram yanda
Ukukhangwa kukaHasan Mountain kuyokwanda
Inhloko-dolobha yaseRussia State Railways 'izokwandiswa yi-ruble eyi-13 billion
Inani lezinsizakalo zezitimela zamakhansela zizokwandiswa e-Istanbul
Ibhasi liyeka ngesitimela sesitimela
Ingosi Yezindaba Khetha inyanga Okthoba 2019 (348) Septemba 2019 (555) Agasti 2019 (508) Julayi 2019 (633) Juni 2019 (504) Kwangathi i-2019 (526) April 2019 (418) March 2019 (521) I-February 2019 (483) UJanuwari 2019 (502) Ibanga 2018 (620) Novemba 2018 (504) Okthoba 2018 (435) Septemba 2018 (517) Agasti 2018 (486) Julayi 2018 (506) Juni 2018 (581) Kwangathi i-2018 (467) April 2018 (545) March 2018 (554) I-February 2018 (500) UJanuwari 2018 (557) Ibanga 2017 (509) Novemba 2017 (427) Okthoba 2017 (538) Septemba 2017 (455) Agasti 2017 (505) Julayi 2017 (479) Juni 2017 (477) Kwangathi i-2017 (493) April 2017 (434) March 2017 (540) I-February 2017 (477) UJanuwari 2017 (538) Ibanga 2016 (487) Novemba 2016 (631) Okthoba 2016 (657) Septemba 2016 (542) Agasti 2016 (608) Julayi 2016 (485) Juni 2016 (661) Kwangathi i-2016 (664) April 2016 (700) March 2016 (804) I-February 2016 (855) UJanuwari 2016 (751) Ibanga 2015 (799) Novemba 2015 (640) Okthoba 2015 (624) Septemba 2015 (428) Agasti 2015 (493) Julayi 2015 (505) Juni 2015 (535) Kwangathi i-2015 (577) April 2015 (622) March 2015 (1017) I-February 2015 (878) UJanuwari 2015 (1077) Ibanga 2014 (963) Novemba 2014 (826) Okthoba 2014 (771) Septemba 2014 (598) Agasti 2014 (808) Julayi 2014 (911) Juni 2014 (735) Kwangathi i-2014 (957) April 2014 (972) March 2014 (864) I-February 2014 (720) UJanuwari 2014 (733) Ibanga 2013 (664) Novemba 2013 (656) Okthoba 2013 (548) Septemba 2013 (570) Agasti 2013 (533) Julayi 2013 (661) Juni 2013 (577) Kwangathi i-2013 (734) April 2013 (1059) March 2013 (1102) I-February 2013 (811) UJanuwari 2013 (906) Ibanga 2012 (911) Novemba 2012 (1168) Okthoba 2012 (830) Septemba 2012 (886) Agasti 2012 (974) Julayi 2012 (863) Juni 2012 (591) Kwangathi i-2012 (445) April 2012 (563) March 2012 (699) I-February 2012 (546) UJanuwari 2012 (417) Ibanga 2011 (149) Novemba 2011 (35) Okthoba 2011 (23) Septemba 2011 (18) Agasti 2011 (25) Julayi 2011 (18) Juni 2011 (16) Kwangathi i-2011 (13) April 2011 (13) March 2011 (33) I-February 2011 (24) UJanuwari 2011 (13) Ibanga 2010 (335) Novemba 2010 (12) Okthoba 2010 (15) Septemba 2010 (12) Agasti 2010 (16) Julayi 2010 (9) Juni 2010 (19) Kwangathi i-2010 (6) April 2010 (3) March 2010 (62) I-February 2010 (303) UJanuwari 2010 (1838) Ibanga 2009 (4) Novemba 2009 (1) Okthoba 2009 (3) Septemba 2009 (3) Agasti 2009 (2) Juni 2009 (3) Kwangathi i-2009 (2) April 2009 (3) March 2009 (9) I-February 2009 (4) UJanuwari 2009 (3) Novemba 2008 (1) Okthoba 2008 (1) Septemba 2008 (2) Agasti 2008 (1) Julayi 2008 (2) Juni 2008 (2) Kwangathi i-2008 (2) April 2008 (1) March 2008 (3) I-February 2008 (5) UJanuwari 2008 (2) Ibanga 2007 (2) Okthoba 2007 (2) Julayi 2007 (1) Kwangathi i-2007 (1) April 2007 (1) I-February 2007 (2) UJanuwari 2007 (1) Ibanga 2006 (1) Okthoba 2006 (3) Agasti 2006 (1) Juni 2006 (2) Kwangathi i-2006 (2) April 2006 (2) March 2006 (2) Novemba 2005 (2) Agasti 2005 (1) Juni 2005 (1) March 2005 (2) I-February 2005 (1) UJanuwari 2005 (1) Ibanga 2004 (1) Okthoba 2004 (3) Julayi 2004 (1) Kwangathi i-2004 (2) Ibanga 2003 (1) Okthoba 2003 (1) Kwangathi i-2003 (1) March 2003 (1) I-February 2003 (1) UJanuwari 2003 (1) Ibanga 2002 (1) Okthoba 2002 (4) Agasti 2002 (1) April 2002 (1) March 2002 (2) UJanuwari 2002 (2) Julayi 2001 (1) Juni 2001 (1) March 2001 (1) Kwangathi i-2000 (3) March 1999 (1) Okthoba 1998 (2) March 1998 (1) Agasti 1997 (1) Okthoba 1996 (1) Agasti 1996 (2) Kwangathi i-1995 (1) Agasti 1992 (1) Kwangathi i-1990 (1)